Qaar ka mid ah Kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya oo dalbaday in baaritaan lagu sameeyo qaabkii kooxda Dakedaha ay ku qaaday Horyaalka dalka Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qaar ka mid ah Kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya oo dalbaday in baaritaan lagu sameeyo qaabkii kooxda Dakedaha ay ku qaaday Horyaalka dalka Sabab?
(18-7-2018) Qaar ka mid ah Kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa dalbaday in baaritaan adag lagu sameeyo qaabkii kooxda Dakedaha ay ku qaaday Horyaalka heerka koowaad iyaga oo sheegay in ay jiraan shakiyo badan oo ah in ay wax musuq maasuqeen.
Gudoomiye yaal kooxaha heerka koowaad oo diidey in aan Magacooda shaacino ayaa qalinkacayaaraha u sheegay in xiligii lasoo dhaafay ee ay kooxda Dakedaha ku Guuleysteen Horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya uu ahaa mid musuq maasuq badan isla Markaana ay hayaan Cadeymo badan oo ay soo bandhigi doonaan markii loo baahdo balse ay doonayaan in Xiriirka kubada Cagta Soomaaliya uu sameeyo baaritaan adag oo kusaabsan qaabkii Dakedaha ay ku qaadeen Horyaalka.
” Waxaa jira kooxo iyo cayaartoy la luushay waxaan haynaa cadeymo lacagihii loo tuuray iyo qaar ka mid ah hadaladii ay kuwada hadleen madaxada Dakedaha iyo kuwa laaluushka ka qaatay sidaa waxaa yiri mid ka mid ah Gudoomiye yaasha kooxaha Heerka koowaad kaas oo diidey in aan magaciisa soo xigano waxaana uu codsaday in Dakedaha lagu Sameeyo baaritaan dhanka musuq maasuqa ah hadii kale ay kafiirsan doonaan ka qayb galka Horyaalka soo socda.
Sidoo kale Waxaa jira tuhun badan oo ku saabsan qaar ka mid ah Xubnaha Xiriirka kubada Cagta Soomaaliya oo mushaar ka qaata ama si gooni ah ula shaqeeya kooxda Dakedaha sidaa daraadeed ayey uga Codsanayaan kooxaha kale Madaxweynaha Xiriirka Kubaad cagta Soomaaliya in arintaas ay wax ka qabtaan isla Markaana la ilaaliyo dhex dhexaadnimada Madaxada Xiriirka.
Marka laga soo tago sheegashada qaar ka mid ah Madaxada kooxaha ee ah in Dakedaha ay sameeyeen Musuq maasuq war ka madax banaan oo xaqiijinaya sheekadaas balse waxaa xaqiiq ah in ay dhacaan isdeysmo kooxo iyo qaar ka mid ah Cayaartoyda kooxaha oo qaatan laaluush si ay usii daayaan koox dooneysa in ay koob qaado mana jirto Naadi ama Cayaaryahan arintaas darteed loo ganaaxay oo aan aragnay.